कांग्रेसका ९ पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई कडा झट्का ! — Motivatenews.Com
कांग्रेसका ९ पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई कडा झट्का !
काठमाडौं – लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले ३ सय भन्दा बढी सिट जितेको छ भने गठबन्धनका अन्य दलसहित ३ सय पचास सिट ल्याएर विश्वलाई चकित पारेको छ । भाजपा गठबन्धनको जितले कांग्रेस लगायतका विपक्षीलाई कडा झट्का लागेको छ ।
मोदी विजयलाई भारतमा ‘मोदी लहर’ भन्न थालिएको छ । ‘मोदी लहर’का अघि ठूला–ठूला नाम पराजित हुन पुगे । देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसका केही यस्ता नेताको सूची यहाँ पेस गरिएको छ, जो एक समय मुख्यमन्त्री भएका थिए।
उनी १० वर्ष मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका थिए। भुपाल चुनावी क्षेत्रमा यसपटक उनीसँग थिइन् भाजपाकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उनी मालेगाँउ बम आक्रमणकी आरोपी हुन्। तर, भाजपाको राष्ट्रवादको ‘न्यारेटी’ र दिग्विजयको १० वर्षको शासनमाथि उठाइएका सवालले भाजपालाई जितको बाटो खोलिदियो। साध्वी प्रज्ञाले उनलाई ३ लाख ८ हजार ५२९ मतले हराइन्।
उनी कांग्रेसकी पहिलो पंक्तिको नेता थिइन्। थिइन् यसकारण कि उनले लगातार तेस्रो चुनाव हारेकी छिन्। र, यो उनको राजनीतिक जीवनकै अन्तिम चुनाव पनि थियो। अहिले उनी दिल्ली कांग्रेसकी अध्यक्ष हुन्। उनलाई हराउने हुन् भाजपाका दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी। साढे तीन लाखभन्दा बढी मतले शिला तिवारीसँग हार्न पुगिन्।
चार पटक सांसद र १० साल हरियाणाको मुख्यमन्त्री रहेका उनी हरियाणमा डुब्न लागेको कांग्रेसलाई सहारा दिनका लागि सोनिपत चुनावी क्षेत्रबाट चुनाव लडे। यो क्षेत्र उनको आफ्नो जन्मथलो थिएन। जबकि ठूलाठूला नेताका लागि कुनै दोस्रो क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्न उति कठिन पनि हुँदैन। उनले न पार्टीलाई बचाउन सके, न आफ्नै सिट। सोनिपतमा रमेश चन्द्र कौशिकले उनलाई १ लाख ६२ हजारभन्दा बढी मतले हराए।
उत्तराखण्डमा कांग्रेस पार्टीका शीर्ष नेता हुन् उनी। यहाँ कुल ५ सिट छन्। भाजपाले सबै क्षेत्रमा जित्यो। न रावतले जिते न उनको पार्टीले नै। नैनीताल-उधम सिंह नगर सिटमा अजय भट्टले उनलाई ३ लाखभन्दा बढी मतले हराए।
अशोक चव्हाण महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। उनी हाल कांग्रेसका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष पनि हुन्। सन् २०१४ मा नान्देसबाट सांसद चुनिएका थिए। तर यसपटक उनले चुनाव हारे। उनलाई भाजपाका प्रतापराव पाटिलले ४२ हजारभन्दा बढी मतले हराएका हुन्।
एक समय सुशीलकुमार शिन्दे देशका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक थिए। युपिए(२ मा करिब २ वर्षका लागि गृहमन्त्री बनेका थिए । यसभन्दा पहिले उनी केही समयका लागि महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री पनि बनेका थिए। यसपटक कांग्रेसका तर्फबाट सोलापुरबाट चुनाव लडेका थिए उनी तर पराजित भए। उनी डेढ लाखभन्दा बढी मतले पराजित हुन पुगे।
उनी कांगेसका तर्फबाट कर्नाटबाट मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। युपिए(२ का दौरान उनको पोर्टफोलियो परिवर्तन भइरहेको छ। कैयौं मुख्य मन्त्रालयहरु उनले पाए। यसपटक पनि उनी आफ्नो पुरानो क्षेत्र चिकबल्लपुरबाट चुनाव लडेका थिए। सन् २०१४ मा उनले यहीबाट चुनाव जितेका थिए। त्यतिबेला मत मतान्तर करिब ९ हजार ५२० थियो। तर, यसपालि चुनाव हारे र मतान्तर पनि कम रहेन। १ लाख ८२ हजार भन्दा बढी मतले उनले हारे।
नबाम त्यो बेला अरुणाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए जुन बेला भाजपाले चुनाव जित्नु पनि बेइमानी जस्तै मानिन्थ्यो। अहिले भाजपाले त्यहाँका २ क्षेत्रमा कब्जा जमाउन सफल भएको छ। तर, यसपालि उनले पनि चुनाव हारे १ लाखभन्दा बढी मतान्तरसहित।
मेघलायमा ८ वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहेका उनीले यसपटक भने हारको समाना गर्नुपर्‍यो। उनलाई अगाथा संगमाले पराजित गरेका हुन्। उनलाई ग्रामीण विकासका राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। त्यो समय उनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका नेता थिए।
पछि उनले त्यो पार्टी छाडेका थिए। यसपटक उनले नेसनल पिपुल्स पार्टीको तर्फबाट लिएको टिकटमा मुकुललाई हराउन सफल भए। उनीहरुबीच करिब ६३ हजार मतान्तर थियो।